Amakhambi Esifo Sikashukela > Ukwelashwa nokuvimbela
Imaphi amakhambi angcono ukusebenzisa uhlobo 2 lwesifo sikashukela
Ngeshwa, inani labantu abatholakala benesifo sikashukela liyanda minyaka yonke. Lesi sifo sibonakaliswa ukwephulwa kwe-carbohydrate metabolism kanye nokwanda kwamazinga kashukela wegazi ngaphandle kwebanga elijwayelekile (ngaphezulu kuka-5.5 mmol / l). Imvamisa kakhulu ikhula ngemuva kwesizinda sokungondleki kanye nokukhuluphala.
Uma lesi sifo sitholakele emazingeni okuqala entuthuko yaso, khona-ke ukuqhubeka kwawo kungaqhubeka nokumiswa ngosizo lwamakhambi ekhethelo ekwelashwa omunye umuthi. Futhi hlobo luni lwamakhambi esifo sikashukela olungasetshenziswa, manje uzothola.
Ezokwelapha, kuyisiko ukuhlukanisa phakathi kwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. Isifo sikashukela sohlobo loku-1 yisifo esisehlelweni lapho kunokucashelwa okufihlakele kwe-insulin. Lokhu kwenzeka ngenxa yokungasebenzi kahle kwamanyikwe, obhekene nokukhiqizwa kwale hormone.
Njengoba umsebenzi oyinhloko we-insulin ukudicilela phansi ushukela bese uwudlulisela emangqamuzaneni nasezithanjeni zomzimba, ngokuntuleka kwaleli hormone, ushukela awuzibolekanga kuzo zonke lezi zinqubo futhi umane uzinze egazini ngendlela yezakhi ze-microcrystalline.
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 singaba yisifo esiyindlalifa noma umphumela wokuphathwa ngokungafanele kwe-T2DM. Ngeshwa, akunakwenzeka ukwelapha lesi sifo ngosizo lwemithi ehlukile. Kulokhu, i-diabetesic idinga ukwelashwa okubuyiselwayo, okusho ukusetshenziswa kwemijovo ye-insulin.
Isifo sikashukela sohlobo 2 siyindlela ehlukile yesifo. Ngokukhula kwayo, i-pancreas isebenza kahle, kepha amaseli alahlekelwa umuzwa wawo we-insulin. Okusho ukuthi, abazidlulisi ngokwabo, ngakho-ke, azigcwele ushukela. Futhi njengoba inani lakhona lidlula okujwayelekile, libuye liqale ukuzinza egazini.
Kulokhu, ungasebenzisa amakhambi esifo sikashukela. Ngeke nje basize ukuguqulela i-glucose egazini ngokweqile, kepha futhi bazokwandisa ukuzwela kwezicubu zomzimba namaseli ku-insulin, okuzovikela ukukhula kwezinkinga nokushintshwa kwe-T2DM kuya ku-T1DM.
Ngabe amakhambi asiza kanjani ngesifo sikashukela?
Kunenombolo enkulu yamakhambi angasetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2. Isibonelo:
cuff nabanye abaningi.
Lezi amakhambi sikashukela ziwusizo ngoba banethonya multifaceted emzimbeni futhi ahlinzeke ukuvimbela kwezinkinga ezahlukahlukene okukhona kulesi sifo. Okokuqala, baneqhaza ekusebenzeni kwezinqubo zokwenziwa kabusha, eziqinisekisa ukuphulukiswa okusheshayo kwamanxeba nezilonda emzimbeni, ngaleyo ndlela kuvimbele ukukhula kwe-gangrene.
Okwesibili, ukusetshenziswa kwabo kungakhulisa ithoni nokuqina kwezindonga zemithambo yegazi, futhi kwehlise izinga le-cholesterol "embi" egazini, ngaleyo ndlela kunciphise ubungozi bezinkinga ohlelweni lwenhliziyo. Futhi okwesithathu, la makhambi ahlinzeka ngokuvikelwa okuthembekile kumaseli wesibindi nezinso kusuka kushukela, okubuye kunciphise amathuba okukhula kwehluleki kwezinso nesibindi.
Ngaphambi kokukhuluma ngokuthi imaphi amakhambi angasetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela, amagama ambalwa kufanele ashiwo ngokuqapha okubaluleke kakhulu ukucubungula ngesikhathi sokwelapha. Into yokuqala ongayisho ukuthi ekwelapheni isifo sikashukela udinga ukucabanga ukwakheka kwamakhambi. Zonke zihlukile futhi ziqukethe izinto ezahlukahlukene eziveza umphumela wazo "wazo".
Ezinye zazo zinikeza umphumela wokugaya, ezinye zifaka isandla ekwehliseni umfutho wegazi. Futhi uma umuntu onesifo sikashukela ehlushwa yizifo ezinjengokwehluleka kwezinso noma i-hypotension, ukulungiswa kwamakhambi kufanele kuthathwe ngokucophelela, ngoba kungaholela ekuwohlokeni okubukhali enhlalakahleni. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kufanele nakanjani ubonane nodokotela.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukulandela imithetho yokugcinwa kwamakhambi, ngoba uma wephulwa, izindawo zokupholisa amakhambi zizoncishiswa bese izinto ezinobuthi ziqwabelana kuzo, okuzovele kukhulise inkambo yesifo.
Amakhambi aphumelelayo avela kushukela
Ukusuka kwishukela, ungasebenzisa ama-decoctions ahlukahlukene kanye ne-infusions elungiselelwe kusuka kumakhambi okwelapha. Kepha ukusetshenziswa kwazo kufanele kwenzeke ngokuya ngayo yonke imithetho, ngaphandle kokuphula imithamo. Ngaphandle kwalokho, imiphumela emibi ingavela ngesimo se-hypoglycemia kanye nezinye izimo ezizobangela ukuwohloka okubukhali enhlalakahleni.
I-Goatskin yisidakamizwa esithandwa kakhulu nesisebenzayo esingathathwa nesifo sikashukela. Womabili la ama-decoction kanye ne-infusions alungiselelwe kuwo. Esimweni sokuqala, kusetshenziswa imbewu yezimbuzi. Zichobozekile futhi zenziwa kabusha, zigcwele amanzi (ingilazi ye-kefir isetshenziselwa izinto eziyi-15- g g), ebilisiwe imizuzu eyi-10-15 bese ipholile. Umhluzi okwelapha kufanele udakwe 1 tbsp. l Izikhathi ezine ngosuku.
Ukuze ulungiselele ukumnika, amaqabunga neziqu zesitshalo zichotshoziwe futhi zihlanganiswa ngokulingana. Ngemuva kwalokho iqoqo ngenani le-2 tbsp. l faka i-thermos, engeza inani elifanayo lembewu yembuzi kuyo, uthele ilitha elilodwa lamanzi bese ugcizelela ubusuku bonke. Thatha isidakamizwa esinjalo ku-50-70 ml kuze kube izikhathi ezi-4 ngosuku.
UStevia akayona imbiza ephumelelayo yesifo sikashukela njengembuzi. Isetshenziselwa ukulungiselela itiye le-herbal, okufanele lithathwe inkomishi e-1 izikhathi eziningana ngosuku. Ukwenza isiphuzo esinjalo ngokwakho, uzodinga amaqabunga e-stevia ochotshoziwe (i-10-15 g), edinga ukuthululwa ngo-250 ml wamanzi abilayo. Ngemuva kokumiselwa imizuzu engu-15, itiye le-herbal lizobe selilungile, kusale kuphela ubunzima.
Kumele kuqashelwe ukuthi emakhemisi lo mbungu uthengiswa ezikhwameni ezikulungele kakhulu ukuzisebenzisa. Uma uthenge nje okunjalo, khona-ke ukwenza itiye kuzodingeka uthathe isikhwama esisodwa, usibeka mug, uthele amanzi abilayo futhi ugcizelele imizuzu engaba ngu-15.
Esinye isitshalo esisebenza kahle sokwelapha esikuvumela ukuba uguqule amazinga kashukela egazini ngesikhathi esifushane. Njengokwelashwa, kusetshenziswa i-infusion, elungiselelwe kusuka imbewu ebomvu. Bachobozelwe kwangaphambi kwesimo sempuphu nenani le-1 tsp. uthele ingilazi yamanzi abilayo, bese uphikelela kuze kube yilapho uketshezi selupholile ngokuphelele.
I-infusion eqediwe kufanele ihlungiswe (ungasebenzisa i-strainer encane noma i-gauze), ngemuva kwalokho kuzobe isilungele ukusetshenziswa. Umthamo owodwa ngu-70-90 ml. Baphuza lesi sidakamizwa kungabi ngaphezu kwezi-4 ngosuku. Ngemuva kwemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ngemuva kokuyithatha, kufanele udle nakanjani, ngoba i-ginger inethonya le-hypoglycemic, futhi uma uphuthelwa ukudla ngemuva kokumngenisa, i-hypoglycemia ingakhula.
Ekwelapheni isifo sikashukela, itiye lezindela lisebenze kahle. Ilungiselelwe kusuka kwezithako ezilandelayo:
amajikijolo kanye namajikijolo,
okhalweni oluhlaza (izithelo kuphela),
Ukwenza itiye lezindela, udinga ukugaya uhlanganise zonke lezi zithako ngamanani alinganayo. Okulandelayo, udinga ukuthatha i-kettle encane, lapho udinga ukubeka i-1 tsp. ulungiselele izinto zokusetshenziswa bese uwuthela ngamanzi abilayo (200-250 ml). Tea uzobe esekulungele ukusetshenziswa ngemuva kwemizuzu engu-15-20. Kepha ukuze amakhambi anikeze izakhi ezengeziwe kuluketshezi futhi abe nomphumela onamandla kakhulu wokupholisa, abelaphi baluleka ukuthi kube njalo ihora.
Endabeni yesifo sikashukela, kunconywa ukuyiphuza inkomishi eyi-1 izikhathi 3-4 ngosuku. Kulokhu, ngaphambi kokuphuza itiye, kufanele lihlanjululwe ngenani elincane lamanzi abilayo.
I-stinging nettle nayo ingasetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. Ukumiliselwa kulungiselelwe kuwo, okuthi lapho kuthathwa inani le-1 tbsp. l kufinyelela izikhathi ezi-4 ngosuku. Ukuze ulungiselele ukumiliselwa, uzodinga cishe ama-15 g amaqabunga akomile asikiwe, okudingeka uwagcwalise ngengilazi yamanzi bese ushiya imizuzu eyi-10-15. Ngaphambi kokusetshenziswa, ukumnika kumele kuhlungiwe.
I-cuff inomphumela omuhle we-hypoglycemic. Ngaphezu kokujwayeza amazinga kashukela egazi, futhi ihlinzeka nokusekelwa kohlelo lwethambo nenhliziyo.
Ukuze ulungiselele umuthi kule imbiza, kuzodingeka uthathe cishe u-1 tbsp. l amaqabunga e-cuff ochotshoziwe, uthele ingilazi yamanzi abilayo bese ugcizelela endaweni emnyama amahora amane. Okulandelayo, njengenjwayelo, ukumnika okuphumayo kudinga ukuhlungwa. Udinga ukuphuza ukumnika imizuzu engu-15 ukuya kwengama-20 ngaphambi kokudla u-80-100 ml ngasikhathi.
Nge-T2DM, ukukhwehlela nakho kungumphumela omuhle wokwelapha. Ukumiliselwa kulungiselelwe kusuka kuwo, okusetshenziselwa izikhathi ezi-4 ngosuku, 15 ml ngakunye. Lokhu kwenziwa ngale ndlela elandelayo: Izinto ezingavuthiwe zenani le-15-20 g zithululelwa ngamanzi abilayo (200-250 ml), embozwe ngesembozo futhi selehlile ekushiseni kwegumbi, bese ihlungwa.
Ithuluzi elisebenza ngokulinganayo ekwelapheni isifo sikashukela liqabunga le-bay. Ngokwengeza amazinga kashukela egazi, futhi kuyasiza ukwehla kwegazi, okuvame ukukhuphuka kushukela.
Ukwenza isiphuzo esinempilo kuzodingeka uthathe amaqabunga ayi-10 e-laurel, uwathululele ngelitha lamanzi abilayo bese ushiya amahora ama-3, bese uxubha. Izazi zesifo sikashukela ziyalwa ukuba ziphuze ikhambi elinjalo engxenyeni yengilazi ngaphambi kokudla ngakunye.
Umuthi ohlukile unikeza imali enkulu yokwelapha isifo sikashukela. Kodwa-ke, azikwazi ukusetshenziswa ngaphandle kokuthintana nodokotela okokuqala. Njengoba kushiwo ngenhla, wonke amakhambi anezakhiwo ezihlukile, futhi phambi kwezinye izifo, ukusetshenziswa kwazo kungaholela emiphumeleni emibi.
Umuthi wamakhambi njengenye yezindlela zokwelashwa ezisizayo
Kumele kuqashelwe ukuthi amakhambi ane-Type 2 sikashukela anomphumela omuhle wokwelapha. Nge-Type 1 pathology, ukwelashwa kwe-insulin kubalulekile, ngakho-ke, ama-infusions wamakhambi anciphisa ushukela awukwazi ukunikeza usizo olubalulekile.
Kusetshenziswa umuthi wendabuko, okungukuthi umuthi wamakhambi, okungukuthi, umuthi wamakhambi, kufanele kuqondwe ukuthi le mishanguzo akuyona enye indlela, kodwa iyisengezo semithi. Kodwa-ke, umuthi we-herbal ungaba nomthelela omuhle emzimbeni futhi, ngokuhambisana nemithi enqunywe udokotela, wandisa amazinga kashukela. Zingasetshenziswa futhi ngempumelelo ekuvinjelweni kwalesi sifo kubantu abaphilile abasengozini, ngokwesibonelo, ukukhuluphala, ukubekeka phansi ngofuzo, ukukhulelwa kanye nezinye izimo.
Izitshalo zemithi zingahlukaniswa ngokwemibandela ngamaqembu ama-2:
1. Ukwehlisa ushukela. Thuthukisa umsebenzi we-pancreatic (uvuselele ukukhiqizwa kwe-insulin) noma uqukethe i-anulinue esekwe isitshalo esekela ishukela egazini.
Iqembu lokuqala lifaka la makhambi alandelayo asetshenziselwa uhlobo 2 sikashukela:
Ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-insulin: i-licorice, i-blueberries, ama-mulberry, amaqabunga ezithelo zebhontshisi, izimpande ze-chicory, i-galega yokwelapha (imbuzi yembuzi).
Iqukethe izinto ezifana ne-insulin: i-chicory, i-dandelion, i-nettle, i-elecampane, i-artichoke yaseJerusalema
2. Ukungabi nomthelela oqondile kumazinga kashukela, kepha kube nomthelela omuhle ekusebenzeni komzimba wonke. Lokhu kungukujwayelekile kokusebenza kohlelo lwezinhliziyo, ukuvuselela kokuqina komzimba, ukuqina kokungazweli, ukulwa nokukhuluphala kanye nokuvimbela ukudakwa komzimba ngemikhiqizo yokubola - imizimba ye-ketone, eyakhiwa ngokweqile ngesikhathi se-metabolic pathology ethile.
Uhlelo lwe-Federal "Healthy Nation" okwamanje luyaqhubeka, ngaphakathi kohlaka lapho lo muthi unikezwa wonke umuntu wase Russian Federation kanye ne-CIS MAHHALA . Ngeminye imininingwane, bheka iwebhusayithi esemthethweni ye-MinZDRAVA.
Iqembu lesibili lifaka izitshalo ezinezindawo ezilandelayo:
Ukuqiniswa okujwayelekile. Ukwephulwa kwezinqubo ze-metabolic kuhlale kuhambisana nokwenza buthaka kwamasosha omzimba. Ngakho-ke, ukuze uqinise amasosha omzimba, kunconywa ukusebenzisa la makhambi alandelayo kwesifo sikashukela sohlobo 2: i-eleutherococcus, i-echinacea, impande yegolide ne-ginseng.
Ubuthi: ukhula, ibhele, iSt John's wort, isinamoni esibunjiwe.
Ukulwa nokuvuvukala nokulimala kwamanxeba. Kuyaziwa ukuthi ngalesi sifo kuvame ukuba nezilonda ezinde kanye namanxeba abonakala emzimbeni. I-rosehip, i-lingonberry, amajikijolo asentabeni angabhekana ngempumelelo nale nkinga.
Ngezakhiwo ezi-vasodilating kanye nokuzolisa: i-valerian, i-yarrow, i-oregano, i-wort yaseSt. Zisetshenziswa ekwakhiweni kwesifo esijwayelekile esijwayelekile njengokuqina kwegazi.
Ukwehlisa ushukela wegazi futhi uvuse ama-pancreas
Ukumenywa No. 1
Ukulungiselela ukuqoqwa kwamakhambi, thatha:
I-1 tsp iqabunga elihlaza okwesibhakabhaka
I-1 tsp impande ye-dandelion
I-1 tsp iqabunga lembabazane
Ukuqoqa uthele i-125 ml yamanzi abilayo, shiya imizuzu eyi-10. Ukuqoqwa okwenziwe ngamakhambi sikashukela kufanele kuthathwe uhhafu wenkomishi izikhathi 3 ngosuku ngaphambi kokudla.
Ukumnika No. 2
1-2 wezipuni zamahlamvu kamalibhele athululela izinkomishi ezi-2 zamanzi abilayo. Isikhathi sokungenisa - amahora ama-2. ukumnika ukusebenzisa phakathi nosuku, ukuhlukanisa izingxenye ezine.
Ku-47, kwatholakala ukuthi nginesifo sikashukela sohlobo 2. Emavikini ambalwa ngithole cishe ama-15 kg. Ukukhathala okuhlala njalo, ukozela, umuzwa wobuthakathaka, umbono waqala ukuhlala phansi. Lapho ngiba neminyaka engu-66, ngangigwaza i-insulin yami kahle; konke kwakukubi kakhulu.
Lesi sifo saqhubeka nokukhula, ukubanjwa kokuhlaselwa ngezikhathi ezithile kwaqala, i-ambulensi ingibuyisela ezweni elilandelayo. Sonke isikhathi bengicabanga ukuthi kulokhu kuzoba okokugcina.
Ukumnika No. 3
1 tbsp i-galega ekhethiweyo yokwelapha (i-goatberry) uthele izinkomishi eziyi-1.5 zamanzi abilayo, shiya amahora angu-2. Phuza ukumnika okubangelwa usuku lonke, uhlukanise izingxenye ezine.
Ukumnika No. 4
1 tbsp. uthele i-spoonful yeqabunga le-blueberry ngamanzi abilayo (izinkomishi ezi-2), ubilise ukushisa okuphakathi imizuzu emi-5. Phuza umhluzi ophumele engxenyeni yengilazi imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ngaphambi kokudla.
Ukuqinisa ukungatheleleki, vikela izinkinga, unciphise izimpawu zezifo ezihlangene
1 ingxenye yamahhashi, iSt John's wort, izimbali ze-chamomile
Izingxenye ezingama-1.5 okhalweni lwama-rose nezimpande ze-aralia
Izingxenye ezi-2 zamahlumela amajikijolo kanye namaqabunga obhontshisi
I-10 g yokuqoqa uthele ama-400 ml wamanzi abilayo, endaweni efudumele, qhubeka imizuzu eyi-10. Sebenzisa i-½ inkomishi yemizuzu engama-30 yokudla phakathi nenyanga engu-1. Ngemuva kokusinda kwikhefu lamasonto amabili, phinda ukwelashwa.
Isifo sikashukela esiqediwe ekhaya. Sekuyinyanga selokhu ngikhohliwe ngokuxhuma ushukela nokuthatha i-insulin. Hhawu, indlela engangihlala ngihlupheka ngayo, ngiphelelwa amandla njalo, izingcingo eziphuthumayo. Kukangaki ngivakashela ama-endocrinologists, kepha kunento eyodwa kuphela abayishoyo: “Thatha i-insulin.” Futhi manje sekudlule amasonto ayi-5, njengoba izinga likashukela wegazi lijwayelekile, hhayi umjovo owodwa we-insulin futhi konke kubonga kule ndatshana. Wonke umuntu onesifo sikashukela kumele afunde!
Ukulungiselela ukuqoqwa kukamakhambi, thatha ingxenye 1:
iqabunga elihlaza okwesibhakabhaka
Lungiselela ukumiliselwa ngesilinganiso sama-g ayi-10. Ukuqoqa izinkomishi ezi-2 zamanzi abilayo. Isikhathi sokungenisa imizuzu eyi-10. Thatha izinkomishi eziyi-0.5 imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ngaphambi kokudla phakathi nenyanga engu-1. Bese kuthi ikhefu lamasonto amabili. Phinda inkambo yokwelashwa.
Ukumenywa No. 3
4-5 wezipuni zehlamvu cranberry athulule 500 ml wamanzi abilayo. Cindezela kokubuthakathaka okwemizuzu engu-15-20. Thatha itiye lokubuyisela phakathi kokudla.
Njengokuthatha umuthi, kunemithetho ethile nezincomo zokusebenzisa umuthi wendabuko. Ukuzigcina ngokuqinile kuphela, ungawezwa onke amandla azuzayo wezipho zemvelo ephanayo.
Izeluleko nezincomo ezinikezwe esihlokweni zinolwazi. Ngaphambi kokusebenzisa laba bantu abelapha, kudingeka ukubonisana nodokotela.
Umuthi okuwukuphela kwawo onikeze imiphumela ebalulekile yi-Dianormil.
Okwamanje, lesi kuphela isidakamizwa esingalapha ngokuphelele isifo sikashukela. I-Dianormil ikhombise umphumela onamandla ikakhulukazi ezigabeni zokuqala zesifo sikashukela.
Futhi kubafundi besayithi lethu manje sekulithuba
uthole i-dianormil MAHHALA!
Ukunaka! Amacala okuthengisa ama-Dianormil mbumbulu asephenduke kaningi.
Ngokubeka i-oda usebenzisa izixhumanisi ezingenhla, uyaqinisekiswa ukuthi uzothola umkhiqizo wekhwalithi kusuka kumenzi osemthethweni. Ngaphezu kwalokho, lapho u-oda kuwebhusayithi esemthethweni, uthola isiqinisekiso sokubuyiselwa kwemali (kufaka nezindleko zokuhamba) uma umuthi ungenawo umphumela wokwelapha.
Imaphi amakhambi asebenza ngempumelelo ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2
Isifo sikashukela yisifo esibi sohlelo lwe-endocrine. Isikhathi eside, kungenzeka ingavezi noma yiziphi izimpawu. Ngenxa yalokhu, kwenzeka izinguquko ezingenakuguqulwa emzimbeni, okungaholela kulimaza izicubu nezitho zomzimba.
Ukwandisa impilo futhi ubuyisele umzimba wakho, ochwepheshe abaningi batusa iziguli ukuthi zenze umuthi wamakhambi. Amakhambi ahlukahlukene wesifo sikashukela sohlobo 2 azosiza ukwehlisa amazinga kashukela egazini futhi futhi athuthukise ukukhiqizwa kwe-insulin.
Namuhla ungathola ukuqoqwa kwamakhambi kunoma iyiphi ikhemisi. Kodwa-ke, abanye abakhiqizi abanandaba nempilo yamakhasimende abo futhi banezela izinto eziningi ezingadingekile kubo. Kuhle ukuqoqa ukulungiswa kwamakhambi ngokwakho, ngakho-ke nakanjani uzokwazi ukuthi yini ekwakhekeni.
Imithetho elandelayo kumele ilandelwe:
Ngaphambi kokuqala umuthi wamakhambi, thintana nodokotela wakho ozokuhlola izici zomzimba ngamunye.
Kungcono ukuzithenga amakhambi ngokwawo kubantu abathembekile asebebavune isikhathi esingaphezu konyaka. Uma zingekho, thenga izithako ekhemisi ngokwehlukana.
Ngaphambi kokulungiselela i-decoction yesifo sikashukela, funda ngokucophelela imiyalo yokupheka. Khumbula ukuthi ukwelashwa ngamakhambi kuthatha isikhathi esanele ukuthola umphumela onenjongo.
Inani elikhulu lamakhambi ahlukene asetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. Zithinta kahle isimo somzimba, futhi futhi zenze noshukela wegazi abe ngokwejwayelekile. Khumbula ukuthi akuzona zonke izitshalo ezilungele abantu abanesifo sikashukela.
Ngokuvamile, amaqembu alandelayo amakhambi asetshenziswa ukulwa nalesi sifo:
Ama-Adaptogens - iRhodiola rosea, umvini we-Chinese magnolia wase-China, u-Aralia Manchurian, ginseng. Bakhulisa amandla omzimba wokuzivikela, bavikela emathonyeni wemvelo we-pathogenic.
Ama-diuretics - ama-birch, ama-Horsetail, ama-lingonberry Asusa uketshezi olwedlulele emzimbeni, ngaleyo ndlela anciphise ukugcwala kweglucose.
Ziphinde zithinte ukusebenza kahle komzimba wonke njengokukonke, zikhuphule amandla alo omzimba kanye nezinqubo ezibangela ukusebenza kwe-metabolic. Ngenxa yezakhi ezihlukile ngemuva kwemithi ye-herbal, zonke izingxenye zegazi ziyabuyiselwa.
Ukwamukela amabhlogo ngendlela ephumelelayo ngangokunokwenzeka, zama ukulandela imithetho elandelayo:
Akuzona zonke izitshalo ezingasetshenziswa, eziningi zazo zingadala ukusabela okunamandla komzimba okuzobe kubhebhethekisa isimo somzimba wonke.
Uma ungenalo ulwazi ngomuthi wamakhambi, kungcono ukuthenga imali eyenziwe ngomumo ekhemisi.
Ama-cook decoctions kumele abe ngokuqinile ngokuya ngemiyalo. Kuhle ukubonisana nodokotela wakho ngaphambi kokwenza lokhu.
Ukuze wandise izinzuzo zomuthi we-herbal, ukwakheka kwe-decoction akufanele kungabi ngaphezu kwama-5-7 amakhambi ahlukene. Uma wenza ingxube yenqwaba yezakhi, ukusebenza kwabo kuzoncishiswa. Thayipha amakhambi esifo sikashukela wohlobo 2 kumele aphuzwe ngokudla okukhethekile. Kulokhu, umphumela wohlelo lokusebenza uzoba mkhulu kakhulu.
Umuthi we-herbal wesifo sikashukela uyindlela edumile yokuvezwa, ebiyaziwa iminyaka eminingi. Abantu abaningi bagcina isimo sabo sempilo ngale ndlela, balahle izibonakaliso ezingezinhle zesifo.
Ngosizo lwamakhambi akhethekile, ungasungula izinqubo ze-metabolic, ezithinta kahle wonke umzimba. Ngenxa yalokhu, ukugcwala kwe-glucose kuzoqala ukubuyela kokujwayelekile, futhi i-insulin izofeza imisebenzi yayo eqondile.
Thayipha amakhambi esifo sikashukela sohlobo 2 akhethwa kangcono uchwepheshe ofanelekayo. Uzohlola izici zomzimba ngamunye, emva kwalokho abesebetha iqoqo elifanele kunazo zonke.
Ngokuvamile, wonke amakhambi angahlukaniswa ngamaqembu ama-2:
Ukunciphisa ushukela - izitshalo lapho kukhona khona izinto ezifana ne-insulin. Ngenxa yalokhu, banganciphisa ushukela wegazi futhi babuyisele imetabolism.
Abanye - baba nomphumela omuhle kuyo yonke imvelo yempilo yonke. Babuyisela umsebenzi wohlelo lwezinhliziyo, banciphise isisindo somzimba, futhi bavikele ukukhula kwezinkinga ezinkulu.
Izitshalo ezinciphisa ushukela azisizi nje ngokwejwayelekile amazinga eglue, kodwa futhi zibuyisela umzimba wonke. Khumbula ukuthi amakhambi anjalo ayasebenza ohlotsheni 2 wesifo sikashukela, kodwa uma kwenzeka uhlobo lonyaka 1 engakwazi ukukhiqiza noma yimuphi umphumela.
Udinga futhi ukuqonda ukuthi umuthi we-herbal akusona isixazululo senkinga. Kusafanele unamathele ekwelashweni okukhethekile, futhi ulandele nokudla. Indlela ehlanganisiwe yokwelashwa izosiza ukuguquguquka komsebenzi womzimba wonke, okungeke kuvume ukuthuthukiswa kwezinkinga.
Isifo sikashukela sohlobo 2 saziwa ngokukhiqizwa kwe-insulin engasebenzi kahle. Futhi, le enzyme kungenzeka ingakhiqizwa nhlobo, noma kungenzeka nje ukuthi ayiqaliwe.
Imvamisa, uhlobo lwesibili lwalesi sifo lubangelwa ukuphazamiseka kwemvelo noma ukukhula okuvela ngemuva kwesizinda sofuzo. Ukwelapha ngamakhambi kuzosiza ukunciphisa ukubonakaliswa kwalesi sifo, kanye nokwenza ngcono inhlala-kahle yakho.
Izimali ezikhethekile zizokusiza ekuhleleni umsebenzi wamanyikwe, ngakho-ke umphumela we-insulin uzokhulunywa ngaphezulu.
Khumbula ukuthi ukuze kuhlolwe ukusebenza kahle kwezokwelapha, kuyadingeka ukuthi ubheke njalo amazinga eglucose egazini.
Futhi, ukuthuthukisa isenzo, odokotela abaningi batusa ukungeza amaqabunga omile we-laurel nama-blueberries, ama-walnuts kuma-decoctions. Ama-birch efihlekile nezimpande ze-dandelion azwakalise ukusebenza kahle.
Izindlela zokupheka ezidumile zokulwa uhlobo 2 sikashukela yilezi:
Hlanganisa izimbali ezilinganayo ze-cornflower, i-dandelion ne-arnica yasentabeni. Gaya kahle ku-blender, bese uthatha isipuni 1 ilitha lamanzi. Beka le ngxube emlilweni bese ibila amahora angama-3-4. Ngemuva kwalokhu, uthele umhluzi esitsheni sengilazi bese ugcine esiqandisini. Ngaphambi kokudla ngakunye, thatha ingilazi umuthi onjalo. Khumbula ukuthi nsuku zonke udinga ukupheka i-decoction entsha ukuze ingalahlekelwa ukusebenza kwayo.
Amakhambi ohlobo 2 sikashukela akusiza ukwazi ukubhekana nempilo engejwayelekile noshukela wegazi ophezulu. Ama-broths asungula i-metabolism, ethinta kahle isimo somzimba wonke.
Uma kukhona ukugula, kuyadingeka ukumisa ukwelashwa futhi ubonane nodokotela wakho. Ngendlela efanele, uzokwazi ukuzuza okuningi kulokhu kwelashwa.
Ama-decoctions amaningi akuvumela ukuthi ubuyise izinga le-glucose emuva kokujwayelekile ngokuthuthukisa imetabolism futhi ubuyisele ukusebenza okujwayelekile kwamanyikwe. Khumbula ukuthi imiphumela ebalulekile ingatholakala kuphela ngendlela ehlanganisiwe: kubaluleke kakhulu ukulandela ukudla okuyisipesheli ngesikhathi sokwelashwa.
Ama-Decoctions akuvumela ukuthi ulondoloze ukusebenza komzimba wonke, ususe ukubonakaliswa okungalungile futhi uvikele ubungozi bezinkinga.
Amakhambi ohlobo 2 lwesifo sikashukela enza kahle abe nomzimba, awondle ngezinto ezisebenzayo futhi nama-vitamin complexes. Imithi yesifo sikashukela, noma ngabe yehlisa izinga le-glucose, kepha ilimaza umzimba wonke.
Amakhambi, uma esetshenziswa kahle, awadali miphi imiphumela emibi nemiphumela emibi.
Izindlela zokupheka ezaziwa kakhulu zokunciphisa ushukela wegazi yilezi:
Thatha ezimbili wezipuni kamalibhele bese uthele izinkomishi ezi-2 zamanzi abilisiwe phezu kwabo. Beka le ngxube ngomlilo bese ibila isigamu sehora. Bese uhlikihla umkhiqizo bese uwuthela ezitsheni zengilazi. Thatha i-decoction yesipuni ngaphambi kokudla, ungawugcina umuthi osuqediwe kungabi ngaphezu kwezinsuku ezi-4 esiqandisini.
Thela isipuni se-oat husk ngengilazi yamanzi abilayo bese upheka imizuzu eyi-15. Umuthi onjalo udakwa ngendlela efudumele ngaphambi kokudla ngakunye. Khumbula ukuthi ekuqaleni kokwelashwa, ikhambi elinjalo lingadala i-nausea nobuthakathaka, akukho lutho olungakhathazeka ngalo.
Izinyathelo ezinje zesifo sikashukela sohlobo lwesibili zingashesha ngokwejwayelekile izinga elikhulayo loshukela egazini. Kuhle ukuthi udokotela wakho akunikeze umuthi onjalo. Uzokwazi ukukhetha umthamo ophephile futhi osebenza kahle, athole ukwakheka okuhle.
Ukuze ukusebenza kwamaqhinga anjalo okuphatha abe phezulu kakhulu, kuyadingeka ukuthatha zonke izidakamizwa ezichazwe ngudokotela, futhi unamathele ekudleni okukhethekile.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela samakhambi akwamukeleki ngaso sonke isikhathi. Kwabanye abantu, lokhu kwelashwa kungaholela emiphumeleni emibi. Kuvinjelwe ngokuphelele ukusebenzisa amakhambi wesifo sikashukela sohlobo 2 lapho kukhona i-hypersensitivity noma i-allergies ezingxenyeni ezithile, ukungasebenzi kahle kwe-renal kanye ne-hepatic, kanye nezimo zomzimba ezinzima.
Khumbula ukuthi umthamo kufanele ukhethwe kuphela ngudokotela oholayo, ozokwazi ukuhlola izici zomzimba ngamunye. Uma kwenzeka ukusetshenziswa okungafanele, ungavusa kalula ukuthuthukiswa kwe-hypo- noma i-hyperglycemic coma.
Ngendlela engalungile yokwelashwa, umuthi we-herbal ungadala kalula izinkinga ezinkulu. Imvamisa, ngokumelene nesizinda sokusetshenziswa ngendlela engafanele kwamakhambi, abantu bahlakulela ukuncipha kokusebenza kwezinso, unyawo sikashukela, kanye ne-visual acuity worsens Inhlala-kahle yesiguli nayo iyaphanga.
Ngokuqapha ngokweqile, ukwelashwa ngamakhambi kufanele:
Abantu abaphethwe yi-malaise nempilo engeyinhle - amakhambi angenza impilo ibe yimbi.
Abantu abazelapha - ukusetshenziswa okungafanele kwemithi ye-herbal kungavusa kalula ukukhula kwezinkinga ezinkulu.
Abesifazane abakhulelwe nabacashayo - ezinye izakhi zingathinta kabi ukwakheka nokukhula komzimba wengane.
Abantu abaphethwe i-asthma ye-bronchial - ukuthatha amakhambi athile kungaholela ekubambeni kakhulu.
Ukwelapha uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela, indlela ebanzi yokuxazulula inkinga iyadingeka. Ngomuthi wamakhambi uwedwa, awukwazi ukunciphisa umthelela omubi walesi sifo emzimbeni. Kuyadingeka futhi ukuthatha imishanguzo ekhethekile futhi ulandele imigomo yokudla okufanele.
Kubalulekile kakhulu ukubonana nodokotela ngaphambi kokuqala ukwelashwa. Le ukuphela kwendlela yokuthola umphumela omuhle kakhulu.
Yimiphi amakhambi aphuzwa ngohlobo 2 lwesifo sikashukela ukwelashwa?
Njengoba lesi sifo sithinta abantu ababalelwa ezigidini ezingama-500 emhlabeni, umbuzo wokwelashwa okusebenzayo unamandla kakhulu. Vele, awukwazi ukwenqaba ukuphuza umuthi noma kunjalo, kodwa kufanelekile ukuzama amakhambi onesifo sikashukela.
Isibonelo, izitshalo eziningi zokwelapha ziqukethe i-inulin yemvelo - into efana ne-insulin, enezindawo ezwehlisela ushukela ngokwedlule.
Ngaphezu kwalokho, ukuvimbela isifo sikashukela kuvame ukufaka hhayi ukugcina impilo enempilo kuphela, kepha nokusebenzisa umuthi wendabuko. Zisetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo. Yini ngqo futhi kanjani ukuthatha kahle amakhambi esifo sikashukela kuzosho le ndatshana.
Kunezinhlobo eziningana zalesi sifo: -sokuncika kwe-insulin, okungaxhamli ku-insulin kanye nakokuthambisa umzimba. Okokuqala kudingeka uqonde ukungafani kwabo komunye nomunye.
Uhlobo oluncike ku-insulin lukhula ikakhulukazi kusukela ebuntwaneni, ngenxa yalokho, lubizwa ngokuthi isifo "sobusha". Kuhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1, kuvela ukuphazamiseka kwe-autoimmune, okuphumela ekusebenzeni kokukhubazeka kwepancreatic. Amangqamuzana e-beta ekuwo ayeka ukukhiqiza i-insulin, i-hormone eyehlisela amazinga kashukela.
Ngenxa yalokho, ushukela uqala ukunqwabelana egazini. Ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 1, imijovo ye-insulin ibalulekile. Kulokhu, ukwelashwa ngamakhambi kuzoba yi-prophylactic ukuze kuvikeleke izinkinga.
Imvamisa, isifo sikashukela sohlobo 2 sikhona kubantu asebekhulile (ngaphezulu kweminyaka engama-40). Le pathology ihlotshaniswa nokwephulwa komqondo wama-cell receptors we-insulin, obizwa ngokuthi yi-insulin ukumelana. Ngasikhathi sinye, ukusebenza kwamaseli we-beta akukhubazeki, bayaqhubeka nokukhiqiza ama-hormone. Imvamisa, lesi sifo siqala kubantu abanokukhuluphala kanye nethuba lokuthola ifa.
Cishe i-90% yabantu abanesifo sikashukela aba nalesi sifo. Ekuqaleni kokukhula kwe-pathology, isiguli singalawula i-glycemia ngenxa yokudla okufanele nokusebenza ngokomzimba, kepha ngokuqhubeka kwayo kudinga ukuthatha izidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Olunye uhlobo lwesifo sikashukela yi-gestational. Iba kuphela kwabesifazane emavikini angama-24-28 wokukhulelwa. Le nto yenzeka ngenxa yezinguquko ze-hormonal emzimbeni kamama okhulelwe. Ngemuva kokuzalwa, lesi sifo kwesinye isikhathi sihamba sodwa. Kepha uma ungalwa nayo, kungaba khona izimo zokushintshwa kwayo kwifomu lesibili sikashukela.
Izimpawu eziqala ngesifo sikashukela ukuchama kaningi ukoma njalo.
Uma umuntu eqala isiyezi, izinhlungu ekhanda nasesiswini, ukukhathala, ukuncipha kwesisindo, ukhubazeka okubukwayo - lokhu kungakhombisa nezimpawu zokuqala zesifo sikashukela.
Amakhambi okwelapha, njengomuthi, awalethi usizo kuphela esigulini, kodwa futhi alimala.
Ukuze ugweme imiphumela emibi, kufanele uqale uthintane nodokotela wakho ngokusetshenziswa kwesitshalo esithile.
Umuthi wamakhambi unomthelela omuhle emzimbeni wesifo sikashukela uma ebambelela kule mithetho elandelayo:
Uma isiguli siqoqa amakhambi okwelapha uqobo, kufanele siqiniseke ukuthi sikhula endaweni ehlanzekile yemvelo (kude nemigwaqo nezitshalo zezimboni). Kuhle ukuziqoqa, unamathela kwikhalenda lokuqoqa nezindlela zokugcina izitshalo.
Lapho kungenakwenzeka ukuqoqa ngokuzimela amakhambi ukuze welashwe, angathengwa ekhemisi, kodwa kungenzeki emakethe. Ngokuthenga amakhambi ngale ndlela, umuntu akanakuba nesiqiniseko sekhwalithi yalo mkhiqizo.
Uma umuntu onesifo sikashukela ebutha amakhambi uqobo, khona-ke kufanele akhumbule ukuthi kunezinhlobo zezitshalo ezifanayo kakhulu komunye nomunye. Kulokhu, kungcono ukuqoqa lawo makhambi lapho umuntu eqinisekile nge-100%.
Amakhambi anesifo sikashukela sohlobo 2 anganikeza kuphela umphumela omuhle uma enosuku lokuphelelwa yisikhathi. Ngaphandle kwalokho, amakhambi ngeke abe nomphumela noma alimaze umuntu.
Lapho kuvela izimpawu zokuqala zokuzwela komuntu ku-decoction noma i-tincture yamakhambi, udinga ukunciphisa umthamo wawo, uma kwenzeka kuba nemiphumela emibi kakhulu, yeka ukuphuza umuthi ngokuphelele. Ungazama enye inketho, ngokuqala ngomuthi omncane.
Kufanele kukhunjulwe futhi: ungathatha amakhambi uma uxoxa ngalokhu nodokotela ngaphambi kwesikhathi bese ulandela imithetho yokuqoqa nokugcina kwabo.
Vele, akuzona zonke izitshalo ezilwa nesifo sikashukela ezisiza ukugxila kweglucose egazini. Yize uMama weMvelo enikeze amanye amakhambi ngaleli khono. Isibonelo, i-elecampane, i-dandelion, i-nettle iqukethe izinto ezinjenge-insulin ezidonsela phansi ushukela.
Kepha ngokuqhubeka kwesifo sikashukela sohlobo 2, kubalulekile futhi ukuvikela izivikeli mzimba. Ukuthuthukisa izitshalo ezinjengempande yegolide, i-leuzeus, i-ginseng ne-eleutherococcus kusiza ukukhulisa ukungaziguli.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela i-mellitus, amaqoqo e-phyto asetshenziswa asusa ubuthi nezakhi zomzimba ze-ballast emzimbeni womuntu onesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, bathuthukisa izinqubo ze-metabolic. Lokhu, okokuqala, ukwelashwa nge-plantain, i-bearberry (utshani bezindlebe zamabhere), i-wort yaseSt. John, ne-marshmallow eyomile.
Enye yezimpawu zesifo sikashukela ukubonakaliswa kwezilonda namanxeba emzimbeni wesiguli. Ama-rose okhalweni, ama-lingonberry kanye namajikijolo ama-rowan anezinto ezilwa nokuvuvukala nezokupholisa.
Ngokuqhubeka kwesifo sikashukela, kuvela izinkinga eziningi, kufaka phakathi ukuthuthukiswa komfutho wegazi ophezulu. Kepha imaphi amakhambi engingawasebenzisa? Ukuze wehlise umfutho wegazi, isiguli sidinga ukusebenzisa i-vasodilator nezitshalo ezivuselelayo. Amakhambi aphambili we-hypertension yi-valerian, yarrow, oregano, wort yaseSt.
Ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1, amakhambi anciphisa ushukela awakwazi ukunciphisa ushukela. Kulokhu, awukwazi ukukwenza ngaphandle kokusebenzisa i-insulin. Futhi ngohlobo 2 sikashukela, izitshalo zokwelapha zingasiza. Kepha kufanele ukhumbule ukuthi ukondleka okufanele nokuphila ngendlela esebenzayo nakho kuyizinto eziphambili ekwelapheni "isifo esimnandi".
Ukunciphisa ushukela wegazi, kuyadingeka ukwethula amakhambi anjalo wesifo sikashukela sohlobo 2, avezwe kulolu hlu:
Ama-Blueberries neBean Sash.
Amaqabunga e-Blueberry ayasebenziseka nakushukela. Kunobufakazi bokuthi bayasiza ukunciphisa ushukela wegazi futhi baqinise izindonga zemithambo yegazi.
Ngaphambi kokusebenzisa noma yisiphi isitshalo ukwelapha ushukela, udinga ukubonana nochwepheshe wezempilo.
Ngaphezu kwalokho, akumelwe sikhohlwe ngemithetho eyisisekelo yokusetshenziswa kwezindlela zabantu.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela i-mellitus ngamakhambi kubandakanya ukulungiswa kwama-decoction ahlukahlukene, i-infusions, itiye lokwelapha kanye nezindleko.
Ngokuya ekwakhiweni, ukwakheka kwetiye kanye nama-decoctions angafaka eyodwa noma izakhi ezimbalwa zezitshalo.
Kwezinye izimo, ukuthathwa kwamakhambi nezimali zawo kwenziwa ngefomu owomile.
Ukunciphisa ushukela wegazi, ungasebenzisa ama-decoctions ahlukahlukene, isibonelo:
Izipuni ezimbili zamaqabunga obhontshisi athululela ilitha elilodwa lamanzi abilayo bese ibila cishe amahora amabili. Ngokulandelayo, umhluzi uyahlungwa bese uphola. Kufanele idakwe nsuku zonke isigamu sehora ngaphambi kokudla izinyanga ezimbili.
Isipuni seqabunga lamahlamvu aluhlaza okwesibhakabhaka sithululelwa engilazini yamanzi abilayo bese sigcotshwa isigamu sehora. Njengoba usupholile futhi umhluziwe, ugcinwa esiqandisini. Udinga ukuthatha isidakamizwa esinjalo isigamu seglasi kathathu ngosuku.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngamakhambi kufanele kuhambisane nokusetshenziswa kwamavithamini ahlukahlukene. Ngakho-ke, umuntu ophatha lokhu kugula angalungisa ukumiliselwa nokukhanywa okufana nalokhu:
isipuni sezinhlungu zama-rose sitshelwa ngamanzi abilayo futhi sibilisiwe imizuzu engama-20, ukwelashwa ngaleli thuluzi kwenziwa kathathu ngosuku ngengxenye yengilazi,
ikhona enye indlela yokwenza - isipuni samaqabunga omile e-currant aqukethe amavithamini P no-C, uthele amanzi abilayo futhi ubilise imizuzu eyi-10, le ngxube ifakwa cishe amahora amane.
Ukwelapha kuqala ngokuthatha umuthi uhhafu wenkomishi kathathu ngosuku, isifundo sithatha izinsuku eziyi-7.
I-Tebal herbal Teabetes nayo iyindlela ephumelelayo yokwenza ngokwejwayelekile i-glycemia nempilo jikelele. Ukusetshenziswa kwesiphuzo setiyitha kuyinto potion emnandi. Ukusetshenziswa kwetiye okuvame kakhulu nge-ginger, i-blueberries kanye ne-currants.
Abaningi besifo sikashukela bathatha izithako zemithi yesifo sikashukela. Basiza ekuqiniseni izivikelo zomzimba ukulwa nokugula okungathi sína. Izindlela eziphambili zokupheka yilezi:
Iqoqo lokwelapha lamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka, i-nettle, i-seedberry, podan emabhonteni, izimpande ze-dandelion. Zonke izithako zithathwa ngamanani alinganayo - 25 mg lilinye. Ngemuva kwalokho le ngxube ithululelwa ngezibuko ezimbili zamanzi abilayo. Umuthi kufanele udakwe uhhafu wenkomishi ngemuva kokudla kathathu ngosuku.
Indlela yesibili yokulungiselela ukuqoqwa ifaka ukusetshenziswa kwembewu yefilakisi, i-wort yaseSt. Ingxube ithululelwa engilazini yamanzi apholile bese ibilisiwe imizuzu engaba ngu-5. Ngemuva kwalokho umuthi ugcizelelwa amahora ama-6 bese uphuza isigamu sengilazi ngemuva kokudla kathathu ngosuku.
Ukubuyekezwa kweziguli eziningi kukhombisa umphumela omuhle wemithi yezokwelapha emzimbeni womuntu. Isibonelo, ukuphawula okwenziwe nguVictoria (oneminyaka engama-47): "... Ngiphuze ukulungiswa kwamakhambi ngama-blueberries kanye nezimbungulu futhi angizange ngilindele ukuthi ukwehliswa ushukela kuzoqala ngemuva kwenyanga yokudla ...".
Isifo sikashukela yisifo esibi esidinga ukubhekwa njalo. Ngakho-ke, ekwelashweni kwayo, zombili izidakamizwa zokwelapha ze-insulin kanye namakhambi asetshenziswa kwabanesifo sikashukela. Ukwelashwa kohlobo lwesibili sikashukela, ungasebenzisa umuthi okwelapha, ozonciphisa izinga le-glycemia futhi uthuthukise impilo yesiguli.
Unganciphisa kanjani ushukela wegazi usebenzisa amakhambi esintu uzotshela ividiyo ekulesi sihloko.
ISaltykov, B.B. Isifo sikashukela se-Microangiopathy / B.B. ISaltykov. - M: Imithi, 2017 .-- 815 k.
IMazovetsky A.G., Great V.K. Isifo sikashukela mellitus. Umtapo we-Library eSebenzayo, eMoscow, Indlu Yokushicilela "Umuthi", ka-1987., Amakhasi angama-284, ukusatshalaliswa kwamakhophi ayi-150,000.
I-Dreval A.V. syndromes ye-Endocrine. Ukuxilongwa nokwelashwa, GEOTAR-Media - M., 2014. - 416 c.